Archive du 20171228
Marc Ravalomanana Anaovana angaredona
Ny hazo avo halan-drivotra ! Izay no mahafintina ny antsojay atao amin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manao angaredona mihitsy ny mpitondra sy ireo mpomba azy, eny hatramin’ny gazety sy haino aman-jerin’ny mpitondra,
TIM Atsimo Andrefana Miomana ny handray ny filoha Marc Ravalomanana
Vonona tanteraka ny handray ny filohan’ny antoko Marc Ravalomanana izay hitsidika any amin’ny renivohitry ny Faritanin’i Toliara amin’ny fiandohan’ny taona vaovao 2018 io ny TIM ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana.
PM Mahafaly Olivier Hidoka tena …
Telo andro sisa dia hivalona tanteraka ny taona 2017. Sambany teo amin’ny tantara maha praiminisitra azy ny lehiben’ny governemanta,
Dr Emile Ratefinanahary Ndao hiara-kientana hanova ny mpitondra !
Hivalona afaka telo andro ny 2017. Nisy ny tafa fohy nifanaovana tamin’i Dr Emile Ratefinanahary Mpandrindra Nasionalin'ny OHT (Olona Hasin’ny Tany) nakana ny heviny momba ny raharaham-pirenena ankapobeny ho an’ity taona hifarana ity sy ny tomban’ny taona ho avy.
Ratiharison Jean Navandahy «Filoham-pirenena manana vina no mendrika antsika»
Nanambara tamin’ny ankapobeny ny tomban’ezaka vitan’ny fikambanana Za’gasy sahy mandroso ny filohany, Ratiharison Jean Navandahy ary nilaza fa afa-po tamin’ny zava-bita satria naneho ny maha olom-pirenena azy ireo hatrany ny mpikambana.
Jobily faha-5O taona Tsy nisy mpiraharaha ny TVM
Mbola ao anatin’ny fankalazana ny faha-50 taonany ny Televiziona Malagasy (TVM) amin’izao fotoana.
Sendika Malagasy Manambana korontana
Manome 48 ora ny fitondram-panjakana ny avy eo anivon’ireo sendikan’ny mpiasam-panjakana Malagasy mba hamerenana amin’ny laoniny ny fandraisan-karaman’izy ireo nanomboka omaly.
Varotra solika amin’ny “bidon” Nandoro ny magazay mpivarotra piesy
Nijoalajoala ny afo omaly tao Ambodisatrana Sambava. Tsy fitandremana amin’ny varotra lasantsy amin’ny “bidon” ao anaty trano no fototry ny loza.
Vidim-bary Fahagagana raha hidina
An’aliny taonina ireo vary nohafarana avy any ivelany nifanesy tonga tetsy Anosibe sy naparitaka manerana ny Nosy tao anatin’ity volana desambra ity mba hampidinana ny vidim-bary eny an-tsena, hono.
Nirodana ny trano Roalahy niara-maty tototry ny tany
Lehilahy roa no indray maty nihotsahan’ny trano tao amin’ny kaominina Andilanatoby, distrikan’Ambatondrazaka, Faritra Alaotra Mangoro ny talata alina teo.
Marolambo 1000Ar ny kapoakan’ny vary, 5000 Ar ny kilaon’ny sira
Mikaikaika ny mponina any amin’ny distrikan’i Marolambo amin’ny vidangan’ny vidim-piainana. Ny saran-dalana fotsiny avy ao Mahanoro mihazo an’i Marolambo dia tafakatra 60.000 Ariary amin’izao, noho ny haratsian’ny lalana, manampy trotraka ny rotsak’orana.
Tokony higadra any Antalaha Nahafaty olona teny 67Ha indray
Miparitaka amin’ny tambajotran-tserasera ny sarin’i Djibril amin’izao fotoana. Voalaza ho namono nahafaty tanora lahy iray teny 67Ha noho ny fifamaliana izy io.
Toetr’andro Mbola hitohy ny orambaratra
Betsaka ny manontany rahefa mahita ny andro manjombona sy manorana hoe : misy rivodoza ve ?
Moramanga-Sainte-Suzanne Hamafisina ny fiaraha-miasan’ny tanàna
Hohamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny kaominin’i Sainte-Suzanne atsy amin’ny nosy La Réunion, kaominina frantsay mpirahavavy amin’i Moramanga an-tampon-tanàna, hoy ny depiote Randriamahefa Henri Charles,
Tsipy kanetibe Bemiray Hotontosaina anio sy rahampitso ny «Grande Finale»
Hotontosaina etsy amin’ny “boulodrôme Paddock” etsy Mahamasina anio alakamisy 28 sy rahampitso zoma 29 desambra 2017 ny “Grande Finale”
« Ireo Manisotra no mahatonga anay tsy nifandray ara-barotra taminao mpanjak’Antananarivo », hoy ilay mpivarotra frantsay Nicolas Mayeur tamin’Andrianamboatsimarofy, 240 taona lasa izay. « Mbola zaza aho tamin’izany ka tsy voafehiko ireo oloko ireo »,
Fitokonan’ireo “transitaires” sy mpitatitra Nikoropaka ny fanjakana namaha ny olana
Niezaka nitady vahaolana maika araka ny baiko midina ny Prefen’i Toamasina sy ny SPAT ary ny MICTSL, nandritra ny fivoriana niarahana tamin’ny solontenan’ireo mpitokona, natao tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina omaly.
Air Madagascar Ny vinan’ny PCA Eric Kohler
Tsy maintsy hampiasaina ny « Esprit d’Entreprise » eo amin’ny fanarenana ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka Malagasy Air Madagascar, hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanana vaovao,
Sarimihetsika malagasy Nisy nandroba ny Horizon Production
Omaly alarobia tamin’ny 5 ora maraina no nitrangan’ny vaky trano tao Mahavoky Atsimo-Mahajanga.
Mpitsabo naratra notafihan'ny dahalo Nalaina helikoptera hanavotana ny ainy
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana, indrindra amin’izao faramparan’ny taona izao. Tsy an-tanàn-dehibe tsy ambanivolo fa dia ahenoana tranga fanafihan-dahalo mila ho isan’andro.
Mpandraharaha saika nisy nanafika Voafandrika ireo jiolahy
Tambajotran-jiolahy hanomana fanafihana mitam-piadiana no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava etsy Anosy, sakelika voalohany, ny sabotsy 23 desambra teo teny Tanjombato.